मुटु एक समस्या अनेक « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७५, ९ कार्तिक शुक्रबार ०६:२६ मा प्रकाशित
बी एण्ड बी अस्पतालमा शुरु गरिएको मुटु विभागमा यतिखेर अत्याधुनिक इन्भेसिव र ननइन्भेसिव सेवाले निरन्तरता पाइरहेको छ । इन्भेसिव अन्तर्गत धेरैले क्याथल्यावको सेवा लिँदै आएका छन् । ननइन्भेसिवमा इ.सी.जी., इको, एविपी, हल्टर, टी.एम.टी सेवा पाइरहेका छन् । यहाँ मुटु रोग विशेषज्ञ, नर्स, पारामेडिक्सलगायतका टीम मिलेर सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यस विभाग स्थापनामा डा.दीपक कुमार मिश्रको ठूलो भूमिका छ । यस अंकमा हामीले मुटु परीक्षणका केही प्रविधिबारे जानकारी गराउने कोशिस गरेका छौं । जानौं डा. मिश्रमको शव्दमा ।
तत्काल हृदयघात भएका बिरामीलाई क्याथ ल्याबमा एन्जियोग्राफी गरेर ब्लक भएको नसा तुरुन्त खोल्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले हृदयघात भएको ९० मिनेटभित्र एन्आियोष्टीबाट खोलिसक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । टाढाबाट आउनेहरुका लागि पनि १ सय २० मिनेट भित्र उपचार गरिसक्नुपर्छ ।
रक्तचाव बढि भएको मानिस
मधुमेह नियन्त्रण नभएमा
शारीरिक ब्यायाम नगर्ने र शारीरिक तौल अत्यधिक भएमा
नराम्रो कोलेस्टेरोल उच्च र राम्रो कोलेस्टेरोल कम भएमा
अत्यधिक धुम्रपान गर्ने ब्यक्ति
उच्चरक्तचाप र हृदयघात
(डा. मिश्र बी एण्ड बी अस्पतालमा मुटु विभागको विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ ।)